Izixhobo ezine (ama-Temperaments) kunye nokuPhilisa okuHloniphekileyo
Umhlaba - Umhlaba - Umlilo - Amanzi
Izinto ezine ezisisiseko (ngamanye amaxesha zibizwa ngokuthi "ukunyuka") ngumoya, umhlaba, umlilo kunye namanzi. Ukuqonda into eyenziwa yinto nganye kusinceda sihlolisise apho amandla ethu kunye nobuthathaka bethu. Abagxeki baye bafumanisa ukuba ukugxila kwizinto kungasinceda xa sifuna ukuba yeyiphi indlela yokwelapha eya kukulungisa ukulungisa iingxaki zethu.
Umoya ubonisa ukuqonda, intliziyo yengqondo kunye nokuxhuma kumandla obomi bendalo.
Umhlaba umele umgangatho, isiseko sobomi, izinto, ukuxhamla kwindlela yokuphila, kunye neengcambu zentsapho.
Umlilo ubonisa amandla, isixhobo sokuguqulwa, uxhumano kumandla omntu, kunye namandla angaphakathi.
Amanzi amele ukukhululwa ngokomzwelo, intuition kunye nokucinga kwangaphakathi.
Sizungezwe izinto ezine zeklasi (umoya, umhlaba, umlilo, namanzi) ngaphakathi kwimeko yethu. Bamelelwa ngumoya esibhakabhakeni sethu, i-terra firma, ukufudumala kwelanga, kunye neendlela ezininzi zokusetyenziswa kwamanzi (ulwandle, imifula, amachibi, ama-creeks kunye namachibi).
Kukho ezininzi iinkcubeko zokuphilisa kunye neenkolo ezibandakanya izinto kwizenzo zabo. Izikhwama ezine kwiTarot zimelela izinto ezine. Ivili lesigqirha ngumzekelo woMthonyama waseMelika ekuqwalaseleni izinto ezine. I-Wiccans ihlonipha izinto zeklasi kunye neyesihlanu eyongeziweyo kule nto imele umoya okanye uqobo.
Ndivame ukutyelelwa kwimithombo yamanzi xa ndiziva ndifuna ukuvuselelwa kwakhona. Ukuthabatha i-soaks kwi-tub, ukuhamba emvula, kunye nokunyuka kwe-skinny e-yolwandle yi-indulgences eyintandokazi. Amanzi kukuxhamla ngokomoya kwaye ndacinga ukuba le nto yinyani kuwo wonke umntu kude kube nini, ngokumangalisa kum, umcebisi we-feng shui endadibana naye wandixelela ukuba wayefumene ukuba kufuphi namanzi ukuba atye.
Wachaza indlela iinkuni ezivakalelwa ngayo ukuba zixhase ngakumbi ngokomoya kunye nokondla okwenyama.
I-Feng shui inesistim sesihlanu: Umthi, Umlilo, uMhlaba, iMetri kunye namanzi .
Thatha i-Quiz Yami: Yiyiphi i-Element okanye iI Elements oyenene kakhulu?
Emininzi Ngezinto Ezikhethiweyo
Ngaba Unayo Zonke Izinto Ezihlanu?
Iimpawu zeGrike zeElemental
Iintlobo ezine kwi-Astrology
Indlela yokusebenzisa i-Feng Shui Elements
Uphando lwaBafazi bembali ngeeNcwadi zabo kunye neeDayari
Ukuzalisa iiFomalog Genealog Form